Afrika iyo Shiinaha oo ku shiraya S Africa - BBC News Somali
Afrika iyo Shiinaha oo ku shiraya S Africa
Lahaanshaha sawirka XINHUA
Image caption Shirka Afrika iyo Shiinaha waxaa uu sii xoojinaayaa xiriirka iskaashiga
Shir ballaaran oo ku saabsan xiriirka Shiinaha iyo Afrika ayaa ka furmaya magaalada Johannesburg. Waxaana la filayaa in dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu shaaca ka qaado balaayiin dollar oo taageero dheeraad ah.
Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping, ayaa shirkaasi ay si wada jir ah waxay isula hogaamindoonaan madaxweynaha Koofur Afrika, Jacob Zuma oo shirkaasi marti gelinaaya.
Shiinaha waa dalka ugu ballaaran ee xiriir ganacsi la leh qaaradda Afrika, lakiin hogaamiyayaasha Afrika waxa ay rajeynaayaa in dalka Shiinaha uu xoogga saaro xoojinta dhaqaalaha iyadoo loo mareeyo mashaariicda dib u dhiska iyo deen aad u badan.
Tobannaan kamid ah madaxda dalalka Afrika ayaa la filayaa inay ka qeybgalaan shirka xiriirka Afrika iyo Shiinaha kaas oo u jeedada laga leeyahay ay tahay in lagu sii ballaariyo xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo dalalka Afrika.
Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping Afrika waxa uu ku sugan yahay dhowr maalin, wuxuuna shaaciyay balaayiin dollar oo taageero ah oo ay ka mid tahay deen inteeda badan lagu bixinaayo mashaariicda hurmarinta dhismaha jidadka.
Madaxda dalalka Afrika waxa ay rajeynaayaa in dib u dhiska jidadka iyo qadadka tareenada inay bilow u noqoneyso hormarka iyo baabi’inta faqriga.
Farriintan ugu weyn ee Shiinaha waxa ay tahay in diiradda la saarayo warshadeynta, casriyeynta beerashada, iyo amniga.
Inkastoo arrinta ugu weyn ay tahay waxa gudaha Afrika laga soo saaro ee la dhoofiyo oo aad u yar, hadana Shiinaha weli waxa uu rajeynaayaa inuu xilli dheer halkan maalgashi ku sameynto.
Si wada jir ahna, tirade dadka Shiinaha iyo Afrika waa 2.3 bilyan oo qof. Taasina waxa ay tusineysaa inay jiraan fursado iyo caqabado aad u waaweyn.